Yenza itshathi yesihloko ene-AutoCAD Civil 3D -Geofumed
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Yenza ibhokisi elithwalayo nge-AutoCAD Civil 3D
Ndiyakhumbula ukuba ixesha elidlulileyo ndathetha malunga nendlela yenza oku ngeSoftdesk, sikwabona abanye bejijisana ukwenza okungafaniyo wesakhiwo esakhelwe kwi Excel.
Kule meko ndiza kuyenza nge-AutoCAD Civil 3D, ngumanyano lwemephu ye-AutoCAD kunye ne-AutoCAD Civil 3D. Ngendlela, okusingqongileyo kuku kakhulu indlela yoMhlaba, ke oko besikwazi nge-CivilCAD akuloncedo kakhulu apha.
Kwimenyu engqongileyo yasekhohlo unokukhetha ukusebenza, Kule meko ndenze ukuba i-Civil 3D Gqibelele ukukwazi ukubona zonke iimenyu kodwa kunokwenzeka ukuba ubone iimeko ezahlukeneyo ezinje ngethrafikhi, uyilo, iGeospatial njl.
Ndineli propati, endiyakhele emaphandleni, ngoku oko ndiyifunayo kukudala umfanekiso wesicatshulwa kunye nemida.
1 Yakha icebo
Ukwenza oku "iipasela / Yenza ipasile evela kwizinto"
Emva koko sikhetha yonke imigca ye-polygonal (ayifani ne-polyline)
Emva koko inkqubo ibonisa ipaneli apho kuya kufuneka ukhethe indawo, isitayile, iileya apho iipropathi zomgca kunye ne-centroid kunye nezinye izityalo ezikrakra ziya kugcinwa khona.
Ukusuka apha ndikhetha ukuba ndibeka ngokuzenzekelayo iileyibhile kumacandelo.
I-Quito ukhetho lokucima i-polygon yentsusa.
Emva koko senza i-0k, kufuneka ibekwe ngokuzenzekelayo kwi-centroid apho indawo yengingqi iqulathe khona.
2. Yakha Itheyibhile Yokuqhuba
Ukwenza oku senza "Iparcel / iitafile zentengiso / umgca", okuthetha ukwenza itafile yemikhombandlela kunye nomgama ukusuka kwimigca.
Iphaneli esishiya isibuza ngesitayile esiya kusisebenzisa kwaye ukuba sifuna itafile ibe yeyokuma okanye iguquguqukayo (ukutshintsha isivumelwano imida itshintshiwe)
Emva koko ucofa apho sifuna khona.
3. Hlela isitayela setafile
Isitayile setafile sinokuhlengahlengiswa, kunye neqhosha lasekunene kwimouse kwitafile evelisiweyo kwaye ukhethe "ukuhlela itafile yesitayile"
Kwaye apha unokutshintsha amagama etafile, izihloko, ii-decimals ngobude kunye nefomathi ye-angle.
Yintoni enokuyenza ngeendwendwe ezimbi
carlos topography uthi:
UMnu uProfesa Alvarez: Iipaseli ze-Autodesk Civil 3d ze-2009 zivela njenge-SIT
Kwiipaseli ze-Autodesk Civil 3d ze-2009 zivela njenge-SIT
Mna ngokufanayo Yasser, kwi-CNR e El Salvador ndinazo ingxaki ukuba ngaba ukwamkela imigca bhokisi (L1, L2, njl) kunye nento zifuna kum ibhokisi uthi ngongoma (P1 ku P2, njl) ngoku, nam ndiyasebenza kule ukulungiswa kodwa andiyi musa ukundishiya okanye igqwirha. Ndakwazi ukunceda?
rolando espinoza meadow uthi:
Enkosi ngokusikhanyisela ngeliphepha lihle kakhulu, umbuzo wam ngowokuba kutheni kungekho manuwali abonisa indlela yokusebenzisa istishi esipheleleyo, zonke zikwi scribb kwaye azikhutshelwa, ndingavuya xa unokuzifaka simahla. indawo.
BRAULIO NAVARRO uthi:
Ngolwazi oluntle naluphi na umsebenzisi we-3D yoluntu, unokudala itafile, mbulela kakhulu.
Ngoku, ngaphandle kokudala itafile kwezifundo kunye nomgama ukufunda Ndingathanda ukwenza kunye zilungelelanise X, Y (UTM), Happy New Year 2011,
Kuhle kakhulu, kuyandisebenzela, kodwa ukugqiba, ndingathanda ukwazi indlela yokuhlela inxalenye ye-L1, L2…L7, kwenye ifomathi efana no-1-2, 2-3…7-1, kwaye kwakhona ukuba ifomathi ethweleyo inokutshintshwa ibe yiZidanga neMizuzo kuphela. Ndizame iindlela ezininzi kodwa ayisebenzi.
Ing. Colunga uthi:
Akukho mbono, andinayo loo nguqulo ngeRibhoni
apho ndifumana iipastile kwi-2009 version, ndiyenza njani?